Yintoni uBrand? | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 4, 2016 NgoLwesihlanu, Julayi 8, 2016 Douglas Karr
Ukuba ndivume nantoni na malunga nokusebenzisa le minyaka imashumi mabini ukuthengisa, kwaba ngokunyaniseka ukuba andizange ukuqonda ngokupheleleyo impembelelo a uhlobo Kuzo zonke iinzame zentengiso. Nangona oku kunokuvakala ngathi ingxelo etyeni, ukuba kungenxa yokuba ifuthe yokuba crafting lophawu okanye iinzame eningenakukholwa ukuzivumelanisa kwimbono lophawu kubaluleke ngakumbi nzima kunam kangaka.
Ukuze sizuze isifaniso, elingana bekuya kuba ngumchweli osebenza kwi khaya. Umchweli siyaqonda ukuba yokwakha iindonga, faka cabinetry, emphethweni nokuhombisa, faka uphahla, yaye ngokusisiseko kulakhela indlu ukusuka kwisiseko. Kodwa ukuba yayisekelwe off-iziko okanye oqhiphuke umbilini, kunganyanzeleka uyazi ukuba kukho into engalunganga, kodwa bengaqondi ukuba okunene ukulungisa njani le ngxaki. Kwaye loo ngxaki nefuthe yonke into isebenza ngayo.
Amava nendlela abayibona ngayo imveliso okanye inkampani kunye negama othile, njengoko ezilungiselelwa iilogo zayo ukuchonga, uyilo emva, kwaye amazwi ukuba alimele.
Yinto isizathu sokuba zisoloko abacebisi uphawu ibe nokuxoxisana kule mihla xa abuze imibuzo embalwa kwaye awukwazi ukufumana iimpendulo ngokucacileyo phambi kokuba baqalise nokuphuhlisa izicwangciso intengiso abaxhasi:
lo lumelo olubonakalayo uphawu yakho, esazi ngayo namathemba bakho abathengi?
Ngubani na umthengi ekujoliswe kunye izigqibo ezanceda zokwenza ushishino uphawu lakho?
Yintoni ekwahlula ngaphandle kwabakhuphisana nabo? Waziwa njani ngokuthelekisa abo ukhuphisana nabo?
Yintoni na le kwilizwi isiqulatho sakho kwaye zokuyilwa esetyenziswayo ukunxibelelana ngokufanelekileyo namathemba bakho abathengi?
Ukuba ukhangela ngokusondeleyo kwabo mibuzo, lincinci kakhulu ngento unqwenela ukwenza yaye ngakumbi ngezinto ukudala ibonwa ngayo. Njengoko ividiyo ithi, ukuba oko abantu bacinga ngawe kwinqanaba ngokweemvakalelo.
Le vidiyo isuka IBorshoff uyabuza kwaye ephendula umbuzo kule vidiyo ukusuka kwiminyaka embalwa edlulileyo xa babeyihamba a rebranding, Yintoni kwiBrand?
Ne mass ukwamkelwa kumajelo enkcazelo - eziphilayo kwimidiya, angqina, kunye nesiqulatho mda - brand kuba nexesha kude nzima ngakumbi ukugcina isidima sabo, nokulungisa isidima sabo, okanye ukwenza uhlengahlengiso brand yabo. Yonke ukuba avelise okanye ethe yaveliswa ngomnye umntu malunga neemveliso zakho, iinkonzo, nesikhungu sabantu, nabantu iimpembelelo brand yakho.
tags: NkonzoNgqamanisouhloboukuthengisa uphawuukuqondwa kwegamauphawu lophawuUkufaka uphawuyintoni uphawu